दर्शक तर्साउनु नै हाम्रो सफलता: नायिका बेनिशा हमाल – Sawal Nepal ||The Power of Information
दर्शक तर्साउनु नै हाम्रो सफलता: नायिका बेनिशा हमाल
२०७६ असार २६, बिहीबार १६:४८ मा प्रकासित
काठमाण्डाै – हरर जनरामा निर्माण भएको नेपाली चलचित्र ‘घर’ मा एउटा घरमा रहेका श्रीमान् श्रीमतीले त्यो घरमा भोगेको आत्मासँगको कथालाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
चलचित्र ‘घर’ लाई लिएर अभिनेत्री बेनिशा हमाल निकै उत्साहित देखिएकी छिन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा खासै फस्टाउन नसकेकी हमाललाई चलचित्र ‘घर’ ले उकास्ने अपेक्षा गरिएको छ । अभिनेत्री बेनिशा भन्छिन्, ‘यो चलचित्रबाट हामीले दर्शकलाई तर्साउनु छ । यदि दर्शक तर्सिनुभयो भने हामी सफल हुनेछौँ।’
नेपालमा बनिरहेका हरर चलचित्रको ढाँचामा चलचित्र ‘घर’ ले परिवर्तन ल्याउने अभिनेत्री हमालको दावी छ । डीएस डिजिटलको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रको लेखन तथा निर्देेशन अर्पण थापाले गरेका हुन् भने शर्मिला पाण्डेले निर्माण गरेकी हुन् ।
चलचित्र ‘घर’ मा लेखक तथा निर्देशक अर्पण थापा, सुरक्षा पन्त, बेनिशा हमाल लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । निरज कँडेलको छायांकन रहेको चलचित्रमा मिलन श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ । चलपचित्र ‘घर’ आउँदो साउनको ३ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउने बताइएको छ । उज्यालो बाट साभार
आलियाको ‘अण्डर वाटर’ हट एण्ड बोल्ड फोटोशुट, हेर्नुहोस् फोटो फिचर …
भाइरल ‘अघोरी बाबाकि पत्नी’ पक्राउ !
शाहरुख खानले राजकुमार रावलाई चुम्बन गरेपछि…
आयुष्मान स्टारर ‘बाला’को पहिलो दिनको कमाई कति ?
विवाहकै दिन मनपर्ने सुपरस्टारको फिल्म रिलिज हुने थाहा पाएपछि यी दुलहाले यतिसम्म गरे
अक्षय कुमारको पारिश्रमिक सय करोड !